राजेन्द्र खेतानः बैंक मर्जरमा फस्ट, बीमा मर्जरमा पनि फस्ट
काठमाडौं । दुई दशकअघि व्यवसायी राजेन्द्र खेतानले लक्ष्मी बैंकमा हाइसेफ फाइनान्सलाई मर्ज गराउँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यक्तिहरु अचम्ममा थिए । उनलाई धेरैका प्रश्नै प्रश्न आए । धेरैले यो ‘मर्ज’
सूर्या लाइफको रणनीतिः ग्राहकको पहिलो रोजाइमा पर्न रि-ब्रान्डिङ र आक्रामक, दिनको ४० रुपैयाँ तिर्दा करोडको बीमा
काठमाडौं । एक दशकभन्दा लामो यात्रासँगै सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले यतिखेर आफूलाई ‘रिब्रान्डिङ’ गरिरहेको छ । रिब्रान्डङसँगसँगै आक्रमक बजार विस्तारको रणनीति पनि बनाइरहेको छ । यसका लागि आकर्षक नयाँ प्रोडक्ट सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालमा बैंकहरु स्थापना हुने लहर चलिरहँदा १८औँ वाणिज्य बैंकको रुपमा स्थापना भयो ग्लोबल बैंक । त्योबेला ग्लोबल बैंकको ‘पोजिसन’ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये धेरै तल थियो । त्यो बेला बैंकको
इन्टरनेटमा बेरुजु तरंगः भारतले इन्टरनेट रोक्ने भनेपछि व्यवसायी र सरकारबीच छलफल, के गर्ने टुंगो छैन
काठमाडौं । तीन वर्षअघि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निकालेको मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका २० वटा इन्टरनेट कम्पनीहरुको बेरुजुले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुमा तरंग फैलिएको छ । महालेखाले बेरुजुको मिलानको लागि सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रेसर
सयौं उद्यमी आमाहरुको नेतृत्व गरिरहेकी निरु, कतिलाई घरबाटै नर्भस बनाइन्छ
काठमाडौं । केही दिनअघि महिला उद्यमी महासंघ नेपाल (एफवीन) अध्यक्ष निरु रायमाझी खत्री जनकपुरको एक तालिममा पुगेकी थिइन् । कोरोना महामारीपछि कलाकारहरको व्यवसायमा प्रभाव पारेपछि उनीहरुको सहयोग होस् भने एफवीनले
२२औं पटकमा अधिकृत बनेका गिरीको ४ महिनामै राजीनामा, बनेपा बदल्न मेयरको भोट माग्दै
काठमाडौं । आइतबार विहान चुनावी प्रचारमा जान अलि हतारमा थिए कञ्चनराज गिरी । आइतबारको कार्यक्रम बनेपा नगरपालिका नाला, वडा नम्बर ३ र ४ मा घरदैलो गर्ने छ । ‘बिहानको कार्यक्रम
सहयोगीको जागिर खान जाँदा पत्रकार बनेका गोकर्ण, कान्तिपुरको अर्थ सम्पादकदेखि महासंघको डिजीसम्म
काठमाडौं । यसैसाता सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५६औं वार्षिक साधारणसभामा गोकर्ण अवस्थीलाई बधाई दिनेहरु धेरै थिए । कारण थियो, महासंघको महानिर्देशकमा पदोन्नति । महासंघको महानिर्देशक हुँदै गर्दा ‘बधाई छ
विवाद, मुद्दा र कर्मचारीको विरोधपछि नियुक्ति ! अब कसरी अगाडि बढ्छ नेपाल टेलिकम ?
काठमाडौं । पद रिक्त भएको झन्डै तीन महिनापछि सरकारले चैत २४ गते सुनिल पौडेललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी)मा नियुक्ति गर्यो । तीन महिनाको अवधिमा नेपाल टेलिकमको एमडी नियुक्तिको विषयमा
नेपाली कागजको ‘दुस्मन’ बन्यो डिजिटल प्रविधि, धिताल भन्छन्, ‘पेशै छाड्नु पर्ने अवस्था आयो’
काठमाडौं । ससाना टिनका पातामा सेता कागजहरु पारिलो घाममा आगनभरी सुकिरहेका छन् । मान्द्रामा सुकाएको बिस्कुन जस्तै । घर छेवैको एउटा टहरोमा लोक्ता पकाउने, सफा गर्ने र कागज बनाउने मेसिनहरु
अधिकार सम्पन्न मेयरको कमसल फिनिसिङ, चिरिबाबुलाई कति अंक ?
काठमाडौं । मेयर चिरिबाबु महर्जनका चुनावी प्रतिविद्धता पूरा भएको भए आज ललितपुर महानगरपालिका कस्तो हुन्थ्यो होला ? चक्रपथमा मोनोरेल कुदिरहेको हुन्थ्यो । पुल्चोक र कुपन्डोलसहित चार ठाउँमा फ्लाइओभर बन्थे ।
अर्थमन्त्रीलाई बजेटमा सुझाव : पुँजीगत लाभकर १५% बनाउनुपर्ने, घरजग्गा एकपटक मात्र किन्न पाउनुपर्ने
काठमाडौंमा बालेनले ल्याए करिब २३ हजार मत, स्थापित आफैले मतदान गरेको वडामा पनि पछि
राजेन्द्र खेतानले सेयर बजारबाट ९ महिनामा गुमाए ५ अर्ब, ‘४/१२ को नीति नहट्दासम्म बजार बढ्दैन’